I-KISSmetrics ikhupha iNgxelo yeNdlela eTyhila kakhulu | Martech Zone
I-KISSmetrics ikhupha iNgxelo yeNdlela eKhombisa kakhulu
NgoLwesithathu, Oktobha 22, 2014 Douglas Karr
Ihlala ibonakala njengeqela KISSmetrics linyathelo elinye phambi kwegophe kwaye banokuba bayenzile kwakhona ngolu kongeza. Ukuba uvule iingxelo zokuhamba kweGoogle Analytics, ufumana idatha ebangel 'umdla malunga nendlela abantu abafika ngayo nokushiya indawo yakho kunye nokuhamba kwezithuthi kuyo ... kodwa awunakuchonga ngokwenyani iindlela abantu abazithathayo.
Sinomthengi okwangoku ukuba sinikezele ngengqondo yokuba ithemba lityelele indawo yabo amatyeli aliqela kwaye belingaphaya kwamaphepha angama-40 ahlukeneyo… kodwa ukubethelelwa apho bafike khona nalapho bashiye khona kububunzima. Phinda phinda loo msebenzi ngamawaka abatyeleli kwaye iya isiba yinto engenakwenzeka.
Ungathini ukuba ungawachonga onke amaphepha okufika kwindawo yakho kwaye ujonge ingxelo elula ebonisa iindlela abantu abazithathayo kwindawo yakho… mhlawumbi ukusuka kwiphepha lokufika, kumbono wevidiyo, ukuya kumaphepha amaxabiso, ukuya kuguquko. Ukuhlalutya nokuqonda amanyathelo athatyathwa ngabantu kungakunceda wenze lula ezo ndlela, mhlawumbi udibanise umxholo, kunye nokubonelela ngephepha elinye elingenamthungo eliphendula yonke imibuzo efunekayo.
Nantsi imbono ye Ingxelo ye-KISSmetrics Path, unokucofa kuyo ukuze uyithathele uvavanyo-lokuqhuba:
tags: indlela yokuguqulaizambathoingxelo yendlelaindlela yokuzibandakanya
Nasi isizathu sokuba abantu bawuthiye umxholo wakho
Ukubeka i-CMO yakho kwiTekhnoloji yeNtengiso kuHlawula!